လမ်းမလျောက်နိုင်အောင်(၁၀)နှစ်ကျော်နာနေတဲ့ဒူးခေါင်းကို အမြန်သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်း – သုတရသ
ကိုယ်တွေ့မို့ မျှဝေပါရစေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ထဲကလမ်းတောင်မလျှောက်နိူင်အောင် နာနေတဲ့ ဒူးကျီးပေါင်းတက်တာအထူးကုနဲ့ပြ/ဆေးမျိုးစုံသောက်/စက်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် မပျောက်လို့ စိတ်ညစ်နေတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး သူ့ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံပေမဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာ။ တပတ်အတွင်းလုံးဝနီးပါးပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်။
မူရင်းတင်သူက သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဦးပါ ကိုယ်တွေ့မို့ စမ်းကြည့်စေချင်တယ် သေချာလို့ကြေငြာပါရစေ၂၀၀၅ကစလို့ဒူးနာခဲ့တာ၂၀၀၈မှာ ဒူးထဲမှာ ချောတဲ့လမ်းကြောင်း သိပ်မရှိတော့ဘူး။ လမ်းတောင်သိပ်မလျောက်ပါနဲ့လို့ profကပြောတယ်။ ၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မတွေ့တာ နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော် ကြာပြီဖြစ်တဲသူငယ်ချင်း သင်္ချာပါမောက္ခ ကိုဝင်းဆွေ(အငြိမ်းစား)ပေးတဲ့ ဆေးနည်း ၆/၈/၁၈နေ့မှာဘဲ
စလိမ်းတာကနေ့ ၇၅%လောက် ကောင်းနေပါပြီ။ သူငယ်ချင်းကတော့ လည်ပင်းကြီးပေါင်း ဇက်လိမ်နေတဲ့အဆင့်ကို ၄၅ ရက်နဲ့ပျောက်ခဲ့တယ်လို့ နုတ်ပြောလေးနဲ့မျှဝေလို့ ၃. ၄ ဦးလောက်လဲအဆင်ပြေနေကြပြီ ဝေဒနာရှိနေရင်ကောင်းစေချင်လို့ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာပါ။ ဆေးနည်းကအရမ်းဈေးသက်သာပါတယ်သုံးကြည့်ပါ။ ရက်ရှည်အကြိမ်များများ လိမ်းဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကွမ်းစားတဲ့ထုံးနဲ့အုန်းဆီကို
သမအောင်ရောစပ်ပြီးလိမ်းတဲ့နေရာထုံးဖွေးနေဖို့လဲမလိုဘူးထုံးများသွားရင်လဲ ထုံးကအဖတ်လိုက်ကွာထွက်ပါတယ်။ အုန်းဆီများသွားရင်လဲ အဝတ်အစားတွေဆီပေပါတယ် ချိန်ဆပြီးရောပါအချိုးအစားအစဉ်ပြေသွားရင် ခြောက်သွားပါတယ်။ ထုံးမကြီးသီးစေ့ ၅ စေ့စာလောက်ကို အုန်းဆီ ၆ စက်/၇ စက် လောက် ထည့်ရင် အတော်ပါဘဲ နှစ်ခုစပ်ပြီးရင် ဖြစ်တဲ့နေရာကိုအတော်ကြာပွတ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ ထုံးမပေါက်ပါကိုယ်တွေ့ပါ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေလို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေထပ်ညွန်းပေးပါအားလုံးသက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ။
မူရင်းတင်သူ.U Zaw Oo
ကိုယျတှမေို့ မြှဝပေါရစေ လှနျခဲ့တဲ့ ၄ လလောကျထဲကလမျးတောငျမလြှောကျနိူငျအောငျ နာနတေဲ့ ဒူးကြီးပေါငျးတကျတာအထူးကုနဲ့ပွ/ဆေးမြိုးစုံသောကျ/စကျတှနေဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ မပြောကျလို့ စိတျညဈနတော သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့တှပွေီ့း သူ့ကိုယျတှဆေို့ပွီးညှနျးလို့ မယုံပမေဲ့စမျးကွညျ့လိုကျတာ။ တပတျအတှငျးလုံးဝနီးပါးပြောကျသလောကျဖွဈသှားလို့ ပွနျလညျမြှဝပေါတယျ။ မူရငျးတငျသူက သူငယျခငျြး ကိုဇျောဦးပါ ကိုယျတှမေို့ စမျးကွညျ့စခေငျြတယျ
သခြောလို့ကွငွောပါရစေ၂၀၀၅ကစလို့ဒူးနာခဲ့တာ၂၀၀၈မှာ ဒူးထဲမှာ ခြောတဲ့လမျးကွောငျး သိပျမရှိတော့ဘူး။ လမျးတောငျသိပျမလြောကျပါနဲ့လို့ profကပွောတယျ။ ၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရကျနကေ့ မတှတေ့ာ နှဈပေါငျး၄၀ကြျော ကွာပွီဖွဈတဲသူငယျခငျြး သင်ျခြာပါမောက်ခ ကိုဝငျးဆှေ(အငွိမျးစား)ပေးတဲ့ ဆေးနညျး ၆/၈/၁၈နမှေ့ာဘဲ စလိမျးတာကနေ့ ၇၅%လောကျ ကောငျးနပေါပွီ။ သူငယျခငျြးကတော့ လညျပငျးကွီးပေါငျး ဇကျလိမျနတေဲ့အဆငျ့ကို ၄၅ ရကျနဲ့ပြောကျခဲ့တယျလို့
နုတျပွောလေးနဲ့မြှဝလေို့ ၃. ၄ ဦးလောကျလဲအဆငျပွနေကွေပွီ ဝဒေနာရှိနရေငျကောငျးစခေငျြလို့ထပျဆငျ့ဖွနျ့ဝတောပါ။ ဆေးနညျးကအရမျးဈေးသကျသာပါတယျသုံးကွညျ့ပါ။ ရကျရှညျအကွိမျမြားမြား လိမျးဖို့တော့လိုပါတယျ။ ကှမျးစားတဲ့ထုံးနဲ့အုနျးဆီကိုသမအောငျရောစပျပွီးလိမျးတဲ့နရောထုံးဖှေးနဖေို့လဲမလိုဘူးထုံးမြားသှားရငျလဲ ထုံးကအဖတျလိုကျကှာထှကျပါတယျ။ အုနျးဆီမြားသှားရငျလဲ အဝတျအစားတှဆေီပပေါတယျ ခြိနျဆပွီးရောပါအခြိုးအစားအစဉျပွသှေားရငျ
ခွောကျသှားပါတယျ။ ထုံးမကွီးသီးစေ့ ၅ စစေ့ာလောကျကို အုနျးဆီ ၆ စကျ/၇ စကျ လောကျ ထညျ့ရငျ အတျောပါဘဲ နှဈခုစပျပွီးရငျ ဖွဈတဲ့နရောကိုအတျောကွာပှတျပေးဖို့တော့လိုပါတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပါ ထုံးမပေါကျပါကိုယျတှပေ့ါ စမျးကွညျ့လိုကျပါ အဆငျပွလေို့ ကောငျးပါတယျဆိုရငျနောကျလူတှထေပျညှနျးပေးပါအားလုံးသကျသာပြောကျကငျးကွပါစေ။